Tales From Sharky's
ညောင်ဦးမြို့၊ ရွှေစည်းခုံဇာတ်ရုံအဟောင်းထဲမှာရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုဂံဆိုင်ခွဲကို လာရောက်လည်ပတ်ပြီးပါ ပြီလား? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပုဂံမှာရှိတဲ့ Sharky ဆိုင်ခွဲကို တမှုထူးခြားပြီး ရင်သပ်ရှူ့မောဖွယ်ဖြစ်အောင် ဘယ်လို ပြုပြင်ပြုလုပ်ထားလာခဲ့သလဲဆိုတာ သင့်ကိုပြန်လည်ဝေမျှပေးပါရစေ။ ကြည်ညိုဖို့ကောင်းလှတဲ့ ရွှေစည်းခုံဘုရားသို့လာရောက်ကြတဲ့လူတော်တော်များများဟာ ဘုရားအနီးမှာရှိတဲ့ အောင်မင်္ဂလာ နာမည်ရှိတဲ့ဇာတ်ရုံကိုလည်းလာရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ သူတို့ဘယ်လိုမှမထင်ထားခဲ့တာက နှစ်အနည်းငယ်ကြာလာတဲ့အ
Visiting our Bagan Restaurant in the Old Shwezigon Theatre, Nyaung-U? Let us tell you about our incredible journey and all of the things that make Sharky's Bagan unique! When the crowds from the majestic Shwezigon Pagoda visited their local theatre, Aung Mingalar, they’d never have guessed that, years later,amaverick Myanmar foodie would be serving-up organic full-English breakfasts on the stage; that where performers once rehearsed their routines backstage,achilled cella
ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ပုဒ်ကတော့ “လျှော့ချသုံး၊ ပြန်လည်အသုံးပြုသုံး၊ စိမ်းလန်းခြင်းစီသို့” ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ် ရည်ရွယ်ချက်ထက် ကျွန်တော်တို့အစားအစာ တွေဟာဆိုရင် ပြည်တွင်း ဖြစ်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး၊ အောဂဲနစ်ထွက်ကုန် များဖြင့်သာ ချက်ပြုတ်ပြု လုပ်ထားပြီး ကျွန်တော် တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲ၊ ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြု လုပ်လဲ စသည်များကို အသေးစိတ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံး သိထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ Sharky ဟာတစ်ခုခုကို ယုံကြည်ပြီဆိုလျှင်ဖြင့် သူဟာအဆုံးထိ မ
Deliveries - Last orders 6pm
Sharky's encourages customers to call 09424271233 before coming to avoid disappointment or enquire or place an order
A big Thank You to all Sharky's customers for your support & Good Health
Sorry except- because of the traveling timeadelivery charge ALWAYS applies to Pun Hlaing, FMI City, Mingladon Tsp, North Dagon Tsp, Thaketa Tsp & Star City
ENQUIRIES@SHARKYS.COM.MM TEL: +95 9424271233‬‬